कसरी हाम्रो छोरा आईफोन वा एन्ड्रोइड को स्मार्टफोन नियन्त्रण गर्न ग्याजेट समाचार
पाको एल गुटेरेज | | Android, एप्पल, सामान्य
किंग्स वा सान्ता क्लाउजले हाम्रो घरबाट बच्चालाई उनीहरूको पहिलो स्मार्टफोन ल्याएको हुन सक्छ। हामी बच्चा भन्छौं तर हामी एउटा उमेर तोक्दैनौं किनकि आजकल यो धेरै स्पष्ट छैन वा जब यो बच्चा हुनबाट रोकिन्छ, न त यस प्रकारको उपकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको उमेर के हो। के स्पष्ट हुनुपर्दछ त्यो छ यो सिफारिश गरिएको छ कि एक मोबाइल फोन र इन्टरनेट पहुँचको साथ एक नाबालिगले न्यूनतम प्यारेन्टल नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ तपाईंको पहुँचको बारेमा। आज हामी हेर्ने छौं कि केहि अभिभावकहरू, टेक्नोलोजीको दुनियामा पनि अत्यन्त भ्रामक भएकोले कसरी यो नियन्त्रण गर्न सक्दछन्।
यसको लागि हामीलाई हो वा हो तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू आवश्यक हुनु अघि, अब उपकरण कन्फिगरेसनबाट नै हामीसँग विभिन्न प्यारामिटरहरू नियन्त्रण गर्न विभिन्न विकल्पहरूको पहुँच छ।
1 कसरी आईफोनको साथ अगाडि बढ्ने
2 यो कसरी गर्ने यदि तपाइँसँग एन्ड्रोइड छ
3 यूट्यूब बच्चाहरू
4 गुगल परिवार लिंक
4.1 प्रयोग र विकल्पहरू
कसरी आईफोनको साथ अगाडि बढ्ने
एप्पल टर्मिनलसँग बच्चाहरूको उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला हुन्छ, चाहे तिनीहरू bण लिइएको हो वा बच्चाको आफ्नै हो।
सुरु गर्न हामीले सेटिंग्समा जानु पर्छ र प्रयोग समयमा क्लिक गर्नुपर्दछजारी राख्नुहोस् मा थिच्नुहोस् र त्यसपछि "यो मेरो [उपकरण] हो" वा "यो बच्चाको [उपकरण] हो।" छनौट गर्नुहोस्।
यसको साथ हामी दुबै टर्मिनल प्रयोग भएको र कुन अनुप्रयोगहरू प्रयोग भईरहेको छ नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। यस तरीकाले मोनिटर गर्नुहोस् र बच्चाले उपकरणसँग गर्ने सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो बच्चालाई अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न वा हटाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ, प्रदर्शन गर्नुहोस् in-app खरीदहरू र धेरै बढी।
तपाईं निर्मित अनुप्रयोग र सुविधाहरूको प्रयोग प्रतिबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ एक अनुप्रयोग वा प्रकार्य निस्क्रिय गर्नुभयो भने, तपाइँ यसलाई हटाउनुहुन्न, बरु अस्थायी रूपमा गृह स्क्रिनबाट यसलाई लुकाउनुहोस्। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंले मेल बन्द गर्नुभयो भने, मेल अनुप्रयोग होम स्क्रिनमा देखा पर्दैन जब सम्म तपाईं यसलाई पछाडि अन गर्नुहुन्न।
तपाईं स्पष्ट सामग्रीको साथमा विशिष्ट संगीतको साथ चलचित्रहरू वा टिभी कार्यक्रमहरू पनि संगीत प्ले गर्न रोक्न सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोगसँग रेटिंग पनि छ जुन सामग्री प्रतिबन्धको माध्यमबाट कन्फिगर गर्न सकिन्छ।
हामी अनावश्यक खोजीहरू हटाउन सिरी प्रतिक्रिया वा अनलाइन खोजीहरू प्रतिबन्धित गर्न सक्छौं। तपाईंको उपकरणको गोपनीयता सेटिंग्स तपाईं कुन अनुप्रयोगमा उपकरणमा भण्डारण गरिएको जानकारी वा हार्डवेयर सुविधाहरूमा पहुँच छ पहुँच गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक सामाजिक नेटवर्क अनुप्रयोग को लागी क्यामेरा पहुँच गर्न अनुरोध गर्न को लागी अनुमति दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाई फोटोहरु लिन र अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
यो कसरी गर्ने यदि तपाइँसँग एन्ड्रोइड छ
एन्ड्रोइडमा यसको लागि राम्रो विधि भनेको बहु प्रयोगकर्ताहरू सिर्जना गर्नु हो सेटिंग्स / प्रयोगकर्ताहरू। यस मेनूबाट हामी कल वा एसएमएस सहित धेरै प्यारामिटरहरू प्रतिबन्धित गर्न सक्छौं। यो विधि उपयुक्त छ जब हामी अस्थायी रूपमा टर्मिनललाई बच्चामा छोड्दछौं, सामान्यतया यो एक वा दुई अनुप्रयोगमा जान्छ।
Google play ले तपाईंलाई अभिभावकीय नियन्त्रण सक्रिय गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यो चाखलाग्दो छ किनकि हामी उमेर अनुसार सामग्री असक्षम गर्न सक्छौं, यस तरिकाले यौन वा हिंस्रक सामग्री छ कि छैन गर्न फिल्टर अनुप्रयोगहरू।
यस नियन्त्रणको स्तर दुबै अनुप्रयोगहरू र खेलहरू, चलचित्रहरू र संगीतमा गर्न सकिन्छ। यो विकल्प Google Play अनुप्रयोगमा नै सेटिंग्स / प्यारेन्टल नियन्त्रण मेनूबाट पहुँच योग्य छ।
यदि यी विकल्पहरू पर्याप्त छैनन् भने, हामीसँग धेरै अनुप्रयोगहरूको पहुँच छ जुन हामीलाई यस कार्यमा मद्दत गर्न सक्दछत्यहाँ असंख्य छन् तर हामी केहि सबैभन्दा उपयोगीलाई सिफारिस गर्न गइरहेका छौं।
दुबै वयस्क र बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोग मध्ये एक YouTube आफ्नै हो, तर हामी राम्ररी जान्दछौं सबै चीज YouTube मा अपलोड गरिएको छ, र हो हामी के चाहान्छौं कि हाम्रा बच्चाहरूको वयस्क सामग्रीमा पहुँच छैन। YouTube बच्चाहरू एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न उत्तम हुन्छ, जहाँ तिनीहरूसँग पारिवारिक मैत्री सामग्रीमा मात्र पहुँच हुनेछ.
एप्लिकेसनमा नै हाम्रा बच्चाहरूले भिडियो हेर्न बिताएको समयलाई जान्न वा नियन्त्रण गर्न विकल्पहरू छन्, साथै सामग्री ब्लक गर्न जुन हामी तिनीहरूलाई हेर्न चाहँदैनौं। यो अनुप्रयोग दुबैको लागि उपलब्ध छ आईओएस कोमो Android.
गुगल परिवार लिंक
गुगल आफैंले बनाएको यो अनुप्रयोग बालबालिकाहरूको मोबाइल फोन रिमोट नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो अनुप्रयोगको साथ तपाइँको बच्चाले मोबाइललाई हेर्ने समयको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छर अनुप्रयोगको साथ कति समय खर्च हुन्छ भनेर पनि।
यससँग तपाईं प्रयोगको प्रकार थाहा पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले आफ्नो उपकरण, र तपाईं समय सीमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तिनीहरू मोबाइलमा छन् वा निश्चित अनुप्रयोगहरू रोक्नुहोस्।
यस अनुप्रयोगको साथ हामी जहिले पनि थाहा पाउन सक्छौं जहाँ कन्फिगर गरिएको उपकरण छ, सामग्रीको दृश्यतामा सीमाहरू सेट गर्नुहोस् जुन गुगल प्ले स्टोरमा फेला पर्नेछ वा गुगलको सेफसर्च कन्फिगर गर्नुहोस्। वयस्क खोजीहरू वा बच्चाहरूको लागि अनुपयुक्त सामग्रीको साथ ब्लक गर्नुहोस्।
प्रयोग र विकल्पहरू
यी यस अनुप्रयोगको केहि उपयोगी विकल्पहरू हुन् जुन दुबैका लागि उपलब्ध छन् आईओएस को रूपमा Android:
स्थान: तपाईं उपकरणको स्थान इतिहास सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ कि यो जान्नका लागि कि तपाईंको बच्चा जाने ठाउँहरूको निजी नक्शा उपकरणहरूको साथ उत्पन्न हुन्छ जहाँ उनीहरू लिंक गरिएको गुगल खाता प्रयोग गर्दछन्।
अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दै: तपाईं जोडिएको खाताको साथ उपकरणहरूमा प्रयोग भइरहेको अनुप्रयोगहरूको गतिविधि देख्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो days० दिनमा कुन अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरिएको छ र कति।
स्क्रीन समय: तपाई मोबाईल स्क्रिन सोमबार देखि आइतबार खोल्न सकिन्छ कि घण्टा संख्या कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विकल्प पनि छ सुत्ने समय, जसले केहि घण्टा स्थापना गर्दछ जहाँ मोबाइल फोन उप्रान्त अनुमति छैन।
aPLICACIONES: तपाईं भर्खरै स्थापना भएको अनुप्रयोगहरू र मोबाइलमा स्थापना गरिएका अनुप्रयोगहरू देख्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंले प्रयोग गर्न नचाहानु भएको चीजहरू ब्लक गर्नुहोस्।
उपकरण सेटिंग्स: तपाईं अनुमति र उपकरण को सेटिंग्स को प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ जुनमा लिंक गरिएको खाताहरू प्रयोग भएको छ। तपाईं प्रयोगकर्ताहरू थप्न वा मेटाउन सक्नुहुन्छ, अज्ञात स्रोतहरूबाट अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न अनुमति सक्षम वा असक्षम गर्नुहोस्, वा विकासकर्ता विकल्पहरू। तपाईं स्थान सेटि settingsहरू परिवर्तन गर्न र उपकरण अनुप्रयोगहरू द्वारा प्रदान अनुमति अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ।
यस अभिभावकीय नियन्त्रण अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाले यन्त्रहरूसँग बिताउने समय सीमित गर्न अनुमति दिन्छ, तपाइँ पहुँच वेब अनुप्रयोग नियन्त्रण र तपाइँले प्रयोग अनुप्रयोगहरू रोक्नुहोस्। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको बच्चाले के गरिरहेको छ वास्तविक समयमा हेर्नुहोस् जहिले पनि स्मार्टफोनको साथ। नि: शुल्क अनुप्रयोगको संस्करणले तपाइँलाई एक बच्चा सम्म नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छअधिक मार जोड्नको लागि, तपाईंले सशुल्क संस्करणमा जानुपर्नेछ। यहाँ तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ आईओएस.
सस्तो संस्करणको लागि मूल्य प्रति वर्ष version .२.42,95। बाट, सबैभन्दा महँगो संस्करणको लागि € १०106,95 to सम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Android र iOS मा कसरी हाम्रा बच्चाहरूको मोबाइल नियन्त्रण गर्ने
गोया पुरस्कार २०२० को सर्वश्रेष्ठ फिल्महरू कसरी अनलाइन हेर्ने